September 9, 2021 – Barnyar Barnyar
မြန်မာပြည်သူလူထုကတော့ အလှူအတန်းရက်ရောပြီး စိတ်သဘောထားပြည့်ဝကြလို့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို စေတနာအပြည့်နဲ့ ကူညီပေးတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းကတည်းက ကြပ်တည်းလာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွါးရေးကလည်း အခုချိန်ထိ ပြန်လည်ဦးမမော့နိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပြည်သူလူထုက အချင်းချင်းမျှဝေပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ချွေးနည်းစာထဲကနေ ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်နေပြည်တော်၊ချင်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့ မိသားစုတစ်စုကလည်း ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး သာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀၀)တိတိကို လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနယ်လှည့်သာသနာပြုလာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်လို့ ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတွေလည်းပေါများပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ဆရာတော်ဘုရားကို ကြည်ညိုစွာနဲ့လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိသားစုလေးက…
မကြာသေးမီကပင် The News International တရုတ်အွန်လိုင်းကမ္ဘာမှာ လူငယ်စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေမျှလာခဲ့ပါတယ် ။ သတို့သမီးက ရိုးရာအဆင်တန်ဆာဖြစ်တဲ့ ရွှေအမြောက်အမြားနဲ့ တန်ဆာဆင်ခဲ့ပါတယ် ။ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွမ်တုံပြည်နယ်၊ Zhongshan မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးရဲ့ သား မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ပါတယ် ။“Tu Hao”…
တစ်ချို့လည်းပဲ စဉ်းစားချင်မှ စဉ်းစားမှာ။ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာတယ်။ဌာပနာဆိုတာ…ထည့်သွင်းတာ၊ ထည့်သွင်းခြင်း တည်ထားခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရတနာတွေ ဘာကိစ္စဘုရားထဲမှာ ထည့်ကြတာတုန်း။နိုင်ငံခြားသားတွေ အမြင်နဲ့ကြည်ရင်တော့ ဒါဟာ အကျိုးမရှိဘူးလို့ ပြောမှာပေါ့နော်။ဒါတွေထည့်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာတုန်း။ ဘုရားရုပ်ပွား ဆင်းတုတော် ထည့်တာတော့ထားပါတော့။ ရတနာတွေ ထည့်တယ်။အခုခေတ်ည်း ထည့်တာပဲ။ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကိုယ့်သဒ္ဓါတရားနဲ့ ကိုယ် ထည့်ကြတယ်။ဘာအတွက် ထည့်တာလဲဆိုတော့…
ခ်စ္သူရလို႔ ေပ်ာ္မလို႔ရွိေသး ကေလး၂ေယာက္ပါရွိေနလို႔ ၀မ္းနည္းၿပီး ထိုင္ငိုခဲ့တဲ့ ေကာင္ေလး ေလာကႀကီးကို အခ်စ္ေတြႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး လူတိုင္းက အခ်စ္ႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႕ေနရကာ တကယ္ခ်စ္တဲ့သူ ရွိသလို တကယ္မခ်စ္ပဲ ကိုယ့္ဘဝထဲကို အေပ်ာ္သက္သက္လွည့္စားခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ အသက္ ၂၀အ႐ြယ္ေကာင္ေလးသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္တူတူလုပ္ရင္း ၂၉ႏွစ္အ႐ြယ္…
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေအာက္မွာ ေနရၿပီး ႂကြက္ေတြနဲ႔စားစရာမရွိ အခက္အခဲျဖစ္ေနရွာတဲ့ အသက္(၉၀)အဖြား
ဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်မှာ နေရပြီး ကြွက်တွေနဲ့စားစရာမရှိ အခက်အခဲဖြစ်နေရှာတဲ့ အသက်(၉၀)အဖွားကျေး…ကျေး…ကျေးဇူးပါ…မုန့်ဟင်းခါးလေး အသုပ်လို စားချင်တယ်။ အဖွား အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ??အသက် (90)နှစ် ရှိပြီ ။ဘာစားချင်လဲ အဖွား ??ပိုက်ဆံ မရှိလို့ မစားနိုင်ရှာဘူးတဲ့ ။ ရော့…အဖွား 50,000 Ks…. ပိုက်ဆံရှိပြီလေ ဘာစားချင်လဲ မေးတော့….မုန့်ဟင်းခါးလေး…
အာနိသင် မြန်မာ ဆေးကျမ်းများ အလိုအရ မန်ကျည်း ပင် သည် ပူ၏ ၊ချဉ်၏ ၊ သည်းခြေကို ဖြစ်စေ တတ်၏ ၊ သလိပ်ကို ပွားစေ ၏ ၊ လေကို နိုင်၏ ၊ အရွက်သည် ရောင်တင်း ခြင်း ၊…
သင့်ကို မြန်မြန်ရုပ်ရင့်သွားစေနိုင်တဲ့ နေ့စဉ် အလေ့အထ ( ၁၀ ) မျိုး သင့် ရုပ်ရည်က လက်ရှိအသက်ထက် ပိုရင့် နေသလား။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ရုပ်ရင့်တာအပြင် သင်နေ့စဉ်နေထိုင်စားသောက်မှု အလေ့အထ တချို့ကြောင့်လည်း မြန်မြန်ရုပ်ရင့်စေပါတယ်။ သင့်ကို ရုပ်ရင့်စေတဲ့ အလေ့အထတွေကို ပြောင်းလဲကြည့်ရအောင်ဗျာ (၁) အဆီမပါသည့်…
မန္တလေးတောင်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ မြွေကြီးနှစ်ကောင် ဆိုတာကို ရောက်ဖူးသူရော မရောက်ဖူးသူများပါ တန်းသိကြမှာပါ။ မန္တလေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့သီချင်းတွေမှာ ဒီမြွေကြီးနှစ်ကောင် အကြောင်းက မပါမဖြစ် ပါလေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒီမြွေကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့ အကြောင်းကို ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဒီမြွေကြီးတွေကို ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ တောရှင်းတော့တွေ့တာ လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ မဟုတ်ပါဘူး။…
မိဘေတြမပါဘဲ အထုပ္ကေလးဆြဲၿပီး ဩစေတးလ်ကို တစ္ေယာက္တည္း ေရာက္လာတဲ့ အာဖဂန္က ေကာင္မေလး ..
မိဘေတြမပါဘဲ အထုပ္ကေလးဆြဲၿပီး ဩစေတးလ်ကို တစ္ေယာက္တည္း ေရာက္လာတဲ့ အာဖဂန္က ေကာင္မေလး တာလီဘန္ေတြက အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတြကိုအလ်င္အျမန္ သိမ္းပိုက္လာခဲ့တာေၾကာင့္ အာဖဂန္ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံကေနထြက္ေျပးဖို႔ ကာဘူးလ္ေလဆိပ္မွာ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။အေမရိကန္စစ္တပ္ကလည္း ကာဘူးလ္ေလဆိပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သိန္းနဲ႔ခ်ီ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ အာဖဂန္ျပည္သူေတြကို ၎တို႔ရဲ႕ C-17 သယ္ပို႔ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံကေန ကယ္ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ႏိုင္ငံကေန…
အသီးအ႐ြက္ေလးေတြကို ၾကာရွည္ခံေအာင္ ထားနည္း ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ အသီးအ႐ြက္ေလးေတြ ၾကာရွည္ခံေအာင္ ထိမ္းသိမ္းနည္းေလး ဗဟုသုတအေနနဲ႔ မွ်ေဝေပးသြားပါမယ္ေနာ္။ ဒီနည္းက ၁၀ရက္ကေန ၁၅ရက္ေလာက္ထိ အထားခံပါတယ္ရွင္..။ေစ်းကဝယ္လာတဲ့အသီးအ႐ြြက္ေတြကို ေရမေဆးေသးဘဲ သတင္းစာ စကၠဴျဖင့္ လုံေအာင္ထုပ္ၿပီး ေရခဲေသတၱာထဲထည့္သိမ္းထားရင္ ပုံမွန္ ထက္ အထားပိုခံပါတယ္ေနာ္..။ခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာအျပင္ကိုေန႔တိုင္းမသြားသင့္ ေစ်းထြက္မဝယ္သင့္တာမို႔ ဒီနည္းေလးက အသုံးဝင္မယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္..။ေရခဲေသတၱာ မရွိတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာဆိုသတင္းစာစကၠဴ…